Wajiyada rusticka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Haddii aad jeceshahay iyaga, ama aad raadinayso xarfaha qaabka rusticka ah, sii wad akhrinta daabacaadan sababtoo ah waxaan kuu keenaynaa mid ururinta qaar ka mid ah xarfaha rusticka ugu fiican ee la soo dejiyo oo buuxi buug-gacmeedkaaga shakhsi ahaaneed.
qoraallada rustic, ku guulaysto aduunka naqshadaynta taariikhda oo dhan. Waxaad u isticmaali kartaa naqshado kala duwan sida boodhadhka, qalabka waraaqaha, calaamadaha, iwm. Aad bay u fududahay in la aqoonsado ilaha qaabkan maadaama ay leedahay walxo qurxiyo oo aad u gaar ah.
Si loo gaadho hel taabashada qaab-dhaqameedka, isticmaalka wejiyada noocaan ah waa lagama maarmaan mashaariicdaada naqshadeynta. Marka xigta, waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah kuwa aan u aragno inay muhiim u yihiin naqshadeena.
1 Waa maxay wajiyada rusticka?
2 Farta rustic si loo soo dejiyo
2.8 Qoraalka Rustic
2.11 Jacaylka Galbeed
Waa maxay wajiyada rusticka?
Nooca nooca rusticka ah waa mid leh waji aan ugu yeeri karno waddan, bilicsanaanta ku saleysan baadiyaha. Inta ugu badan ee xarfahan, waxay leeyihiin ka mid ah jilayaasha ay aad u calaamadsan serifs iyo stroke ballaaran, laakiin waxa kale oo jira sans-serif ama wajiyo qoraal ah oo si fiican u buuxinaya bilicdaan.
Isticmaalka wejiga farta gacanta lagu qoray ee mashruucaaga naqshadaynta rusticku waxay si fiican ugu shaqayn kartaa bilicda guud ee isu keenta muuqaalka waddanka. Dhanka kale, haddii waxa aad raadinayso ay tahay far-qoraalka serif-ka ee aad loo calaamadeeyay, waxaa jira qaar badan oo aad ka heli doonto kuwaas oo si sax ah ula qabsanaya bilicda la raadinayo. Ka sokow, waxa jira wajiyo qoraal ah oo la mid ah bilicda rusticka ah ee aanu raadinayno, sida xarfaha block oo la mid ah shaambada.
Farta rustic si loo soo dejiyo
Waxaa jira fursado badan oo naloo soo bandhigay si aan u shaqeyno naqshado leh qaab rustic ah. Qaybtan, waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah xarfaha rusticka ugu fiican labadaba bilaash iyo lacagba si loo daboolo baahiyaha mashaariicdaada.
Qaar ka mid ah xarfaha ka muuqda liiskan waa u bilaash isticmaal shaqsi iyo ganacsi, bilaash isticmaal shaqsi ama hoos yimaada shatiga lacag bixinta.
Marka hore, waxaanu kuu keenaynaa a nooca qadiimka ah ee rustic oo ku salaysan qaabkii hore ee maraykanka. Waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho afar nooc oo kala duwan oo ka mid ah faylalka; Farta caadiga ah, faaligga, farcanka canabka ah iyo farcanka canabka ah.
Waxay leedahay in ka badan 88 xaraf iyo xadhigyo kala duwan oo lagu abuurayo naqshado qurux badan qoraal ahaan. Nooca noocaani wuxuu si sax ah ugu shaqeeyaa naqshad kasta oo ka kooban geedo canab ah iyo rustic.
Nooca serif-ga gacanta lagu sameeyay, oo ku habboon horumarinta calaamadaha, kaararka ganacsiga, boodhadhka, calaamadaha, iwm. Iyada oo muuqaalkeeda rusticka ah, waxay la qabsataa sida aan hadda u akhrinay naqshad kasta.
Haddii aad raadinayso far qoraal leh serifs xoog leh iyo saameyn duugowdayTani waxay noqon kartaa mid ka mid ah fursadaha ugu fiican.
Waxaa dhiirigeliyay waagii reer galbeedka oo uu naqshadeeyay Brave Lion Fonts. Xaaladdan oo kale, qoraalkan aan ka hadlayno waa nooc bilaash ah oo ah farta qadiimiga ah ee Western Slab Serif. Waxaad u isticmaali kartaa mashaariicda ganacsiga iyo kuwa gaarka ah.
Waa il in wuxuu u shaqeeyaa sida soo jiidashada naqshadeynta boodhadhka, bandhigyada, calaamadaha. Ilaa inta qaybaha naqshaduhu ay ku wareegsan yihiin bilicda rusticka ah ee aan ka hadlayno.
Iyadoo a aad u cajiib ah iyo hab lab waxaan kuu soo qaadanaynaa qoraalka Huvet Waxay si fiican ugu habboon tahay naqshadaynta astaanta, naqshadaynta wejiga, iyo calaamadaynta alaabta. Waxa aad ka heli doontaa Ingiriisi, nambaro, xarfo waaweyn iyo xarfo yar, calamadaha xarakaynta iyo waxa ay sidoo kale ku socon karaan labada Mac iyo Windows.
Tusaalahani wuxuu ku saabsan yahay a block typeface oo leh miisaan aad u badan, waxa aad ka arki kartaa serif fiiqan marka lagu daro qaab-xiran ee jilayaashooda.
Far galbeed oo bilaash ah oo leh a qaab qallafsan oo uu dhiirigeliyay marxaladda galbeedka duurjoogta ah. Ku fiican naqshadaha waaweyn sida boodhadhka ama calaamadaha.
Waa il ay ka kooban tahay xarfo waaweyn oo keliya iyo calaamado lahjad. Waxaad kaliya u isticmaali kartaa mashaariicdaada gaarka ah.
Halkaa marka ay marayso, waxaanu kuu keenaynaa a nooca rustic ee cufan. Qoyska qoraalkan, waxaad ka heli kartaa saddex nooc oo kala duwan; joogto ah, wareegsan iyo canabka. Mid kasta oo ka mid ah qaababkan waxaa ka mid ah qoraalo dhib badan oo kala duwan.
Haddii aad raadinayso guri guri iyo nashqad casri ah, Beeralayda ayaa buuxinaya shuruudahan. Tani ma aha oo kaliya, laakiin qoraalkani wuxuu si ku filan u shaqeeyaa nooc kasta oo nashqad ah oo siinaya a dhinaca xoogga iyo taariikhda.
Iyada oo afar nooc oo kala duwan si ay ula shaqeeyaan, tani farta waxyooday ee Maraykanka, doorasho sax ah haddii aad rabto inaad siiso taabasho casri ah oo qadiimi ah si aad u naqshadeyso mashaariicda.
Sidoo kale, Waxaad heli doontaa jilayaal kale oo ku siin doona muuqaal la yaab leh qaybta la abuuray. Waxa ku jira liis dhamaystiran oo glyphs ah, nambaro iyo calaamado xarakayn.
Farta gacan-qorista waxaa dhiirigeliyay qoraal dhab ah. Waxay si sax ah ugu shaqeysaa naqshadaha moodada, isbeddellada, aroosyada, ama qayb kasta oo ku lug leh raaxada.
Waa a far qoraal ah oo leh qaab rustic u eg oo culus oo xiran. Waxaad haysataa xarfo far waaweyn iyo kuwo yaryarba, iyo sidoo kale nambarada, calaamadaha xarakaynta iyo lahjadaha.
Waxa loo kala saaraa sida a Erayada isku-dhafka ah, oo ay dhiirigelisay marxaladdii maskaxeed ee 70-meeyadii. Waxaa ka mid ah istaroogga, waxaan arki karnaa saameynta Californian iyo waagii Hippie.
Yermo, waa a typography oo leh shakhsiyad gaar ah oo aad loo calaamadeeyay oo ku habboon naqshado kala duwan.
Waxay ina tusinaysaa laba nooc oo kala duwan kuwaas oo ay ku jiraan xarfo waaweyn iyo kuwa hoose, calaamado, lambaro iyo sidoo kale taageero luqado badan ah.
waxaan kuu keenaynaa tan typography oo leh qaab kale oo shakhsi ah. Waxay ku habboon tahay mashaariicda la xidhiidha naqshadaynta calaamadaha, baakadaha alaabta dabiiciga ah ama calaamadaha.
Una far geesinimo leh oo leh bilicda rustic, kaas oo lagu bixiyo hufnaanta xarfaha xarfaha. Waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku nakhshadayso adiga oo isticmaalaya farihiisa waaweyn, xarafkiisa yar iyo taageerada luqadaha badan.
Si loo dhammeeyo daabacaadan, waxaan soo bandhigaynaa a qaab-qoraalka qoraalka oo gacanta lagu sameeyay midabka biyaha Waa xarfo muuqaal ah oo aad u macquul ah iyo ikhtiyaar qumman oo loogu talagalay naqshadaynta hawada jaceylka ah, sida saxiixyada, kaararka arooska, xigashooyinka, qoraallada, iyo kuwo kale oo badan.
Sidaad aragtay, waxaa jira far badan oo rustic ah oo aan ka heli karno si aan u soo dejino oo aan ula shaqeyno. Dhammaantood waxay leeyihiin tayo sare oo dhammaystiran iyo xallin labadaba.
Hadda oo aad haysato ururintan xarfaha cajiibka ah, waa wakhtigaaga si aad u bilowdo isticmaalka mashaariicdaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » qoraalada rustic
Sida loo isticmaalo tablet-ka sawirada Photoshop